Intathelizindaba Zemidlalo Ziyahlangana ngoMgqibelo Zikhetha amaSoccer Stars
Lwezi 20, 2014
Intathelizindaba zemidlalo ziyahlangana ngoMgqibelo zikhetha abadlali bomdlalo wenguqu abadlale kuhle lonyaka, amaSoccer Stars. Kodwa ingcitshi zithi akusoze kubelula lokhu ngoba bebalutshwane kabi abadlali abatshengise ukuba zingcitshi zomdlalo wenguqu lonyaka.
Iqembu elingene lonyaka esigabeni se Premier Soccer League ele ZPC Kariba likhangelelwe ukuba libe labadlali abambalwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka ngemva kohlelo lokukhetha abadlali bomdlalo wenguqu abadlale kuhle lonyaka.
Leliqembu lidlale ngendlela emangalise abanengi njalo lisesimeni esihle esokuphakamisa isicoco seligi ekufikeni kwemidlalo komlindi uyacina kuyonale impelansonto ezayo.
Uhlelo lokukhetha abadlali abadlale kuhle lujwayele ukusolwa kakhulu ngabalandeli bomdlalo wenguqu besithi indlela abalobi bezemidlalo abakhetha ngayo iyasolisa kodwa loba lonyaka kufakwe labokaputeni bamaqembu ukuba bephatheke kuloluhlelo umsekeli weqembu le Highlanders uJoseph Dube uthi akusoze kube lula ukusuthisa izifiso zabalandeli.
Intathelizindaba ezizaphatheka kuhlelo lokukhetha abadlali abadlale kuhle zikhethwe kumaphephandaba asesigodlweni iHarare lako Bulawayo okuyinto ekhubaze ezinye intathelizindaba ezisebenza zizimele zodwa okuyizo ezibhala ngezomdlalo wenguqu emadolobheni amancane.
Uhlelo lokukhetha abadlali luvele luhlala lufika sekulempikiswano evutha amalangabi phezu komdlali ongetheswa inkatha yokuba nguye odlale ukwedlula abanye njalo lonyaka asekhona amabizo asematheni abantu kodwa umlandeli womdlalo wenguqu uSikhanyisiwe Ngwenya uthi kumele kukhangelwe ukuba abadlali baqhube njani umnyaka wonke.
Abanye abadlali abadlale kuhle lonyaka abangangena kukhalenda ngabagoqela unozinti weqembu le ZPC Kariba uTendai Hove labanye abadlali be ZPC abathi uDennis Dauda, uLimited Chikafa kanye lo Tawanda Munyanduri, uBlessing Moyo kanye lo Steven Alimenda abeqembu le Dynamos, uThabani Kamusoko weqembu le FC Platinum, uLawrence Mhlanga weqembu le Chicken Inn, uGodknows Murwira weqembu le Shabanie Mine, uFelex Chindungwe weqembu le Highlanders kanye lo Kudakwashe Musharu oweqembu le How Mine.